एमाले नेताहरुलाई मीन विश्वकर्माको व्यंग्य : ‘१६ पुगी १७ लाग्दा यस्तै हुन्छ नि भनेझैं पार्टी फुट्दा यस्तै हुन्छ’ (भिडिओसहित) « रिपोर्टर्स नेपाल
एमाले नेताहरुलाई मीन विश्वकर्माको व्यंग्य : ‘१६ पुगी १७ लाग्दा यस्तै हुन्छ नि भनेझैं पार्टी फुट्दा यस्तै हुन्छ’ (भिडिओसहित)
प्रकाशित मिति : १३ भाद्र २०७८, आईतबार
‘कांग्रेसले यसो छड्के आँखा हेर्दा फुट्ने पार्टी कस्तो पार्टी हो एमाले ?’
काठमाडौं, १३ भदौ । प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता तथा पूर्वमनत्री मीन विश्वकर्माले ढिलोमा अबको ४८ घण्टाभित्र सरकारले पूर्णता पाउने दाबी गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे गठबन्धनमा आवद्ध दलका शीर्ष नेताहरुबीच सहमति भैसकेको उनको भनाई छ ।
आज (आईतबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै नेता विश्वकर्माले यस्तो बताएका हुन् । उनले माधव नेपालले पनि सरकारमा सहभागी हुने बताएकोले नै पर्खिंदा सरकारलाई पूर्णता दिन केही ढिलाई भएको भएपनि भोलि साँझसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार भैसक्ने दाबी गरे ।
क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश नल्याएको भए संसद् र सरकारको पूर्ण कार्यकाल सुनिश्चित्ता गर्न नसकिने थियो भन्ने धारणा राखे । उनले आफूहरुको कारण एमाले विभाजन नभएको पनि स्पष्ट पारे । लोकतन्त्रमा दल विभाजन हुन दुःखद् भएको उनको टिप्पणी थियो ।
उनले भने,‘अहिले एमाले अप्ठ्यारोमा छ । नेताहरुको अभिव्यक्ति आक्रोशित छ । एमाले नेताहरुको प्रश्नको जवाफ दिन थालियो भने हामी पनि अलमलमा पर्छौं । १६ पुगी १७ लाग्दा यस्तै हुन्छ नि भन्ने गीतजस्तै पार्टी फुट्दा यस्तै हुन्छ । छोडेर जानेहरुलाई सत्तोसराप गर्ने प्रचलन हो । एमाले र माओवादी केन्द्र जोडद ४५ लाख मत थियो । कांग्रेस एक्लैले ३५ लाख प्राप्त गरेको थियो । जनमत कांग्रेसको ठूलो हो । गएको निर्वाचनमा केही ट्याक्टिस, हावादारी कुरा नगर्दा, रेल, तेल र सुरुङको कुरा नगर्दा हामी परीणाममा दोस्रो भयौं ।’
उनले राजनीति दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु गलत नभएको पनि स्पष्ट पारे । उनले भने,‘त्यो संसद् नभएको बेला ल्याईन्छ । हिजो केपी ओलीले पुष ५ गते संसद् विघटन गरेर ल्याउनुभयो । अहिले शेरबहादुर देउवाले संसद् पूनःस्थापना गरेर संसद्को अधिवेशन अन्त्य भएको बेलामा ल्याउनुभयो । हिजो दल विभाजन गर्ने मनशाय नै थिएन । तर, अहिले त अवस्था अर्कैै थियो । अध्यादेश अपरिहार्य थियो । सुरक्षित रुपमा ल्याईएको थियो ।’ उनले प्रतिनिधिसभा सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाको भूमिका ठीक रहेको पनि स्पष्ट पारे ।
उनले भने,‘सांसदलाई कारबाही गरेको कुरा संसदीय दलको निर्णय हुनुपर्छ । त्यतिकै कारबाही गर्न पाईँदैन् । केपी ओलीले संसद्मा विश्वासको मत लिँदा, सांसदहरुलाई ह्वीप जारी भएको थिएन । अनि कसरी कारबाही गर्न मिल्छ ? बास्तवमा भन्ने हो भने एमालेका यो संसद्मा सांसद नै छैनन् । जति सांसद छन् उहाँको कदमविरुद्ध उभिएका सांसद छन् । एमालेले १४ जना सांसदलाई कारबाही गर्न भनेर सभामुखसमक्ष पत्राचार गरेको छ, तर उहाँले १५ दिन विचाराधिन राखिदिनुभयो । यो संविधानसम्मत् छ । अध्यादेश बाध्यात्मक परिस्थितिमा आएको हो । सभामुखले संविधानसम्मत् भूमिका खेल्नुभएको छ ।’
एमाले नेताहरुले कांग्रेसले आफ्नो पार्टी फुटाईदिएको भनेर लगाएको आरोपमा पनि कुनै सत्यता नभएको विश्वकर्माको टिप्पणी थियो । उनले भने,‘नेपाली कांग्रेसले यसो छड्के आँखा हेर्दा फुट्ने पार्टी कस्तो पार्टी हो ? त्यस्तो पार्टी नबनाउनुहोस, धराप र कमजोर पार्टी नबनाउनुहोस । एमाले व्यवस्थित् भएर आओस । तर, एमाले उठ्ने समभावना छैन् । एमाले फुट्दा कांग्रेस खुशी छैन् । एमाले विभाजन हुँदा हामी खुशी छैनौं । हामी दल जुट्दा खुशी हुन्छौं ।’
उनले अहिले एमालेले ठूलो दल भएर प्रतिपक्षी दलमा बस्नु परेको भनेर पीडा सुनाएकोमा पनि टिप्पणी गरे । उनले भने,‘एमालेलाई आफू प्रधानमन्त्री हुँदा दोस्रो भएपनि ठीक हुने, अनि तेस्रो भएपनि ठीक हुने । तर, अरु भयो भने गुनासो मात्रै किन ? उनले आपतविपत्मा सबभन्दा ठूलो औषधी धैर्यता हो । यो बेला एमालेका नेताहरुले धैर्यता लिनुहोस । कांग्रेसलाई कुनै हर्ष छैन्, बरु विस्मात् छ ।’
हाम्रो परिवार राम्रो परिवारमा नयाँ कार्यसमिति चयन
काठमाडौं, ९ असोज । ‘हाम्रो परिवार राम्रो परिवार’ को नयाँ कार्यसमिति चयन भएको छ।निर्मला अधिकारको
प्रकाशमान सिंहले गरे सभापतिमा उम्मेद्धवारी दिने घोषणा
काठमाडौं, ९ असोज । नेपाली काँग्रेसका नेता तथा पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले १४औं महाधिवेशनमा सभापतिमा
काठमाडौँ, ९ असोज । मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजले ‘भारत प्रवासमा रहेका नेपाली
अबको चुनावमा एमालेलाई टर्च बालेर खोज्नुपर्ने अवस्था आउँछ : माधव नेपाल
मकवानपुर, ९ असोज । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले आगामी
दुई महीनामै भित्रियो साढे ४४ करोडको विद्युतीय गाडी
बझाङ, असोज १० । सरकारले भन्सार महसुल बढाएपछि अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो २ महीना ठप्पै
सौताने बहिनी बलात्कार गर्ने बझाङका युवकलाई भारतमा फाँसीको सजाय
बझाङ, असोज १० । आफ्नो सौतेनी बहिनीलाई बलात्कार गरेको भन्दै बझाङका एक युवकलाई भारतमा फाँसी